Nyi Mu Yar: လော်ပါးဆက် က ညစာ
at Friday, April 10, 2009 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar
တစ်ခါစားဘူးတယ်ဗျ. အကင်တွေကတော့ မဆိုးပါဘူး. ဒါပေမဲ့ အချဉ် မကြိုက်ဘူးဗျ ချိုတိုတိုကြီး အချဉ်က ကျတော်တို့ ဗမာပါးစပ်နဲ့မထိဘူးလို့ပြောရမယ်
SGX မှာလုပ်နေတဲ့ ဘော်ဒါတစ်ယောက်ကတော့ ပြောပြောနေသား။ တစ်ခါမှတော့ မရောက်သေးဘူး။ ကားပေါ်ကနေတော့ မြင်ဖူးလိုက်တယ် ညဘက်ဆိုင်တွေခင်းထားတာကို။ မြည်းစမ်းကြည့်ဦးမယ်။
မဟား တရား စားပြီး လှုပ်လီ လှုပ်လဲ့ ပြန်ခဲ့ရတယ်ပေါ့လေ။ မိုးကောင်းသူတို့ ခေါ်လိုက်ပါလား။ လှုပ်လီ လှုပ်လဲ့ ပြန်စရာမလိုတော့ ဘူးပေါ့။ အဲဒီက ငါးလိပ်ကျောက်ကို ပဲငါးပိဆမ်းထားတဲ့ ဟာလဲစားကောင်းတယ်။
10 April 2009 at 16:57
တစ်ချက်လောက် လင်းပါဦး မမညီမူယာရယ် :D
စလုံးရောက်တာ ၂နှစ်ကျော်ပေမယ့် shoppin mall ကလွဲရင် သိပ်မရောက်ဖြစ်ဘူး ကျောင်းနဲ့ partime က နေရာယူထားလို့
တခါမှမရောက်ဘူးလို့ ဒီနေ့ညတင်သွားစားပစ်လိုက် တယ်။ပုဇွန်ကင်ကိုအကြိုက်ဆုံး။အချဉ်ရည်က မကောင်းဘူး။လမ်းပေါ်မှာထိုင်စားရတာမိုက်တယ်။ အစားသောင်းကျန်းတာ ။ ဟီ ဟိ ။
ဖြိုးမော် ၊ ညီ ရေ လော်ပါးဆက် ကိုသွားတဲ့ မြေပုံလင့်တင်ပေးထားပါတယ်။ ရပ်ဖယ် ဘူတာက ပိုနီးပါတယ်။ အကို တို ့က တော့ ဗိုက်ချောင်အောင် ပိုဝေးတဲ့ တန်ဂွျွန်ပါကာ ဘူတာ ဖက်ကပဲ သွားပြန်လေ့ရှိပါတယ်။
ကျန်တဲ့ ဖတ်ရှုအားပေးသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်လျှက် ရှိနေကြောင်းပါဗျာ။
Map Of Lau Pa Sat